कुरा एनआरएनको कि शेष घलेप्रति बिषबमन ? - Enepalese.com
कुरा एनआरएनको कि शेष घलेप्रति बिषबमन ?
इनेप्लिज २०७२ मंसिर ४ गते ११:४१ मा प्रकाशित
केही दिन यता एनआरएन र अध्यक्ष शेष घलेबारे केही कुरा बहिर आएको अवस्था मा मेरो आफ्नो बिचार यो समयमा राख्नु उपयुक्त होला भनेर भूमिका नबांधी ठाडो भाषामा पस्कने प्रयास गरेको छु । हुन त यस्ता कुरा भर्खरै नियुक्त हुनु भएकी एनआरएनकै प्रबक्ता रन्जु वाग्लेले यो सबै प्रस्ट पार्नु पर्ने हो भन्ने मेरो बुझाई तर यती धेरै दिनसम्म पनि तेसो भएको छैन । एनआरएनको एक अभियन्ता र एक संचार कर्मीको हैसियतले मेरो कुरा राख्ने प्रयास गर्दै छु ।
उधुमै भयो भनेर प्रचार गरिएका, देखिएका कुरा र भनिएका कुरामा जम्मा जम्मी ४ थरी चर्चा छन । पहिलो, भर्खरै नियुक्ती गरिएको भनिएको सदस्य तथा सल्लाहाकार लगायतको बारे, दोश्रो ति नियुक्ती बिधान सम्बत् भयो या भएन भन्ने बारे, तेश्रो आफ्नै श्रीमतीलाई समेत नियुक्तीका लागि नाम प्रस्ताब गरे भन्ने कुरा, अन्तिममा यी सबै कुरामा महासचिबको असन्तुस्टी भयो भन्ने कुरा ।
सबै भन्दा पहिलो कुरा एनआरएनएका महासचिब डा बद्री के.सी को असन्तुस्टी भयो भन्ने कुरा मान्ने अधिकारिक आधार आज यो मेरो कुरा लेखिरहंदाको समय (१९ नोवेम्बर,२०१५), प्यासिफिक समय अनुसार साँझ ८ तीस बजे सम्म कतै देखिएको अवस्था छैन । न बद्री के.सीले बक्तब्य दिएको अवस्था छ, न उनले कुनै सामाजिक संजाल तिर लेखेको अवस्था छ । कुनै छलफल हुनु कुनै पनि कारणले अनर्थ होइन । अर्को कुरा एनअरएन जस्तो गरिमामय संस्थाको महासचिबले यस्तो कुरा गरेर जाने कुरा आउँदैन । होइन भने डा बद्री के.सी को अधिकारिक कुरा अाधिकारीक रुपमा बहिर आउनु पर्‍यो । अब कुनै आधिकारिकता बिना उहबारे कुरा गर्नु बेकारको समय नस्ट हो ।
दोश्रो कुरा महासचिबको कुरा अध्यक्षले गरे भन्ने कुरा कसैले पनि आधिकारिकता दिएका छैनन । यस्तो खालको नियुक्ती अध्यक्षले नै प्रस्ताब गर्ने हुन, कुन चाहिं अनर्थ भयो त ? यो बिबादको बिषय नै होइन । किन बरालिन्छौ हामी ?
तेश्रो कुरा, गरिएको भनिएको नियुक्ती बिधानत भयो या भएन या निर्वाचनमा पराजित हुनेलाई नुयुक्ती गर्न हुने या न हुने भन्ने कुरा आएका छन । निर्वाचनमा पराजय भएका लाई सामान्यतया नियुक्ती गर्नु राम्रो होइन भन्ने मान्यता या बिचार नराम्रो होइन र हामी पनि तेसै भन्दैछौ तर सबै जसो संस्थामा कुनै न कुनै रुपमा यस्ता नियुक्ती भएका छन र हामीले देखेका छौ । तत्कालको निर्वाचनबाट पराजय हुनेहरुलाई नियुक्ती गर्न हुन्न भनेर बिधानमा लेखौ भन्दा सो समयमा मान्दैनन र पछि बिबाद गर्छन । यो बिबाद गर्ने बानी परेका तर श्रीजनात्मक बिचार कतै नदिनेहरुको स्वभाव हो । जब बिधानमै प्रबन्ध छैन बिबाद किन?
चौथो आफ्नै श्रीमतीलाई सदस्यमा नाम प्रस्ताब गरे भन्ने कुरा । पहिलो त योग्यता पुगेको मान्छे रोक्ने कुरा हुन्न र को थियो भन्ने भन्दा पनि सक्ष्यम थियो या थिएन भन्ने हो । जमुना गुरुङ योग्य, सक्ष्यम र शेष घलेसङै पूरा समय एनआरएनमा लागि परेको अभियन्ता हो जसले उनका काम, योगदान र क्षमतालाई नजिकबाट हेरे बिबादै गर्दैनन । यो पनि चर्को बिबादको बिषय होइन केबल कुनासो हो ।
कुरा गरौ बिधान सम्मत नियुक्ती भयो या भएन भन्ने कुरा । बिधानको धारा २२ को उपधारा १४ को बुंदा १ मा मनोनित सदस्य बारे यसो भनिएको छ : अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदले कम्तिमा पाँच जना महिला प्रतिनिधि सहित बढीमा १५ जना सम्म सदस्यहरु मनोनित गर्न सक्नेछ । यि सदस्यहरुको पदाबधी परिषदको पदाबधी समाप्त भए पछि स्वत: समाप्त हुनेछ । अब ति ब्यक्तीहरुको बारे अन्त कतै निर्वाचनमा पराजित लाई नियुक्त गर्न नहुने भन्ने ब्यबस्था छैन । यो बिषय बिधान सम्मत भएन भन्ने कुरा सत्य होइन केबल पराजय भयकालाई नियुक्ती नगर्दा राम्रो हुने भन्ने बिचार मात्र हो, बिधान होइन ।
अब बिट मार्नु अगाडि मलाई के भन्नै मन लाग्दै छ भने, यो सबै कुरा संस्थाका आधिकारिले बाहिर लिएर आएका, आफ्नो अनुकुल नहुँदा गुनासो छता-छुल्ल गरेका हुन भने गोपनियताको संकट बुझौ । होइन भने काम नगर्ने केबल कचरी गर्नेहरुले शेष घले प्रति गरेको बिष बमन हो ।